Shinoa Mpampiasa Vola Manery Tantsaha Malagasy Hivarotra ny Taniny Amin’ny Ariary Fito · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Jona 2017 5:05 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, Italiano, Español, 繁體中文, English
Ny Farihy Tsimanampetsotsa, atsimo-andrefan'i Madagasikara. Sary nopihan'i Frank Vassen avy ao Bruxelles, Belzika – CC-BY-2.0
Teren'ireo vahiny Shinoa ny tantsaha any atsimo andrefan'i Madagasikara hivarotra amin'izy ireo ny taniny amin'ny vola zara raha 7 ariary ny metatra toradroa (latsaky ny $0.01). Araka ny voalaza tamin'ny vaovaon'ny TV Plus Madagascar, notaterin'ny mpanao gazety, Ivon Mahandrisoa sy Angelo Ranaivoarisoa tamin'ny 24 May 2017. Nisy fifanarahana fifampivarotana tany nitovitovy tamin'izany tao Kenya tamin'ny 2008, ka 40.000 hektara no nisandaina teo amin'ny $0.05 isaky ny metatra toradroa. (Vidiana 1481,5 Ariary ny mofo dipaina iray).
Efa maherin'ny 4856 hektara sahady (12,000 acres) no azon'ireo Shinoa mpampiasa vola, izay nampiseho taratasy momba ny tany tamin'ireo tantsaha mba ho soniavina. Milaza ireo tantsaha tao amin'ny kaominina ambanivohitr'i Antanimieva sy Befandriana Atsimo fa mahatsapa ho tsy afa-mandà ry zareo— noho ny tahotra ny ho voaroaka tao, izay tsy maintsy hihatra amin'izy ireo ihany anefa, ka sady hamoizany ny taniny sy ny vola kely nomena azy ireo.
Jean Renoavy, tantsaha iray ao Antanimieva, nilaza tamin'ilay fantsom-baovao fa lasan'ireo mpampiasa vola ny tany firaofan'ny biby fiompy, ary hatreto dia ombivavy telo nirenireny teny amin'ny faritra efa lasan'ireo Shinoa amin'izao fotoana izao no voatifitra. Amin'ny tranga sasany, hoy izy, efa nanomboka nampiasa ny tany ireo mpampiasa vola, araka izay dia nahatsapa ho tsy nanana safidy afa-tsy ny manao sonia ny taratasy sy mandray ny vola ireo vahoaka.
Fifangaroanà filavoana lefona sy kiana atao amin'ny fanjakàna ao Madagasikara ireo fanehoankevitra hita ety anaty serasera. Hoy i Mirija974 nanoratra:
Fanambakàna tsotr’izao ‘zany tany namidy 7 Ar/m2 ‘zany. Fa tany tsisy fanjakana intsony angaha i Madagasikara?
Tsy zavatra maningana ao Madagasikara ny fakàn'ireo vahiny ny tany. Lasa mitombo be mihitsy ny fakàna tany fambolena ataon'ireo firenena manankarena na ireo vondron'orinasa iraisampirenena any amin'ireo firenena mahantra. Manana filàna avo amin'ny resaka sakafo sy vokatra hafa toy ny fingotra ireo firenena manankarena, ankoatry ny filàna ateraky ny tsy fisian'ny tany sy ny loharanonkarena voajanahary, raha toa kosa any amin'ireo firenena mahantra, mora ny famokarana ary tondraka ny loharanonkarena voajanahary. Noho ny azo lazaina ho tsy fisian'ny fifanarahana iraisampirenena mandrindra ny resaka fifampivarotana tany, tsy misy famporisihana araka ny lalàna mba anànan'ireo orinasa hiantohany ny fampiasambolany ary ireo tohivakam-pamatsian-dry zareo dia tsy tafiditra ao anatin'ny tany izay nalainy avy amin'ireo vahoaka monina eo amboniny.
Notaterin'ny Global Witness, ONG iraisampirenena izay misintona lakolosy momba ireo fifandirana mifandraika amin'ny resaka loharanonkarena voajanahary sy ny kolikoly, ireo fakàna tany any amin'ireo firenena toa an'i Liberia sy Myanmar. Naborak'ireo fanadihadian-dry zareo ireo fifanarahana momba ny tany izay misy idiran'ny taratasy hosoka sy fanomezandàlana natolotra mifanohitra amin'ny lalàna eo an-toerana. Nisy tatitra mitovy amin'izany, navoakan'ny Oxfam, momba ireo tany famokarana siramamy ao Brezila mahatafiditra ny orinasa Coca-Cola sy ny PepsiCo, ary avy amin'ny “Friends of the Earth” – Ireo Naman'ny Tany, momba ireo Ogande nakisaky ny Wilmar, ilay orinasa iraisampirenena mpamokatra voanio fakàna menaka.
Ambaran'ireo mpanohana fa samy mahazo tombony amin'ireny fampiasambola amin'ny tany ireny ny rehetra, izay mety hitondra asa maro azo tsapain-tànana ho an'ireo tambanivohitra miaina anaty fahantràna, hatramin'ny fandrisihana ny fampiroboroboana ireo fotodrafitrasa, sekoly ary ivontoerana ho an'ny fahasalamana. Mampitandrina ireo mpisolovava mahay ny zo amin'ny fananantany momba ny fifandrohizana misy amin'ny fakàna ny tany, ny kolikoly, ny fanimbàna tontolo iainana ary ny fifandonana eo an-toerana—sy ny takaitra avelan'ireo fakàna tany tsy ara-dalàna amin'ireo vondrom-piarahamonina efa voahilikilika sahady. Araka ny “International Food Policy Research Institute (IFPRI), Ivontoerana Iraisampirenana Mikaroka momba ny Politikan'ny Sakafo – tao Madagasikara, ireo fifanarahana hampanofa tany mirefy 1,3 tapitrisa hektara hovolena katsaka sy voanio fanao menaka no mety niteraka ny fanonganana fanjakana tamin'ny 2009 ary ireo olana politika sy toekarena naterak'ireo krizy.
Angatahan'ireo fikambanana toy ny Global Witness ny hametrahana lalàna iraisampirenena hisian'ny mangarahara amin'ny resaka fifampivarotana tany sy fiarovana ny zo ary ny fiveloman'ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana. Mandritra izany, manome sosokevitra ny IFPRI ny hanaovan'ireo tompontany madinika hetsika matanjaka, miaraka amin'ny fanohanan'ny fiarahamonina sivily, ho toy ny tetikady mahabe fanantenana hisoloana vava amin'ny fomba tsaratsara kokoa ny polika nasionaly sy ny eo an-toerana momba ny fampiasàna ny tany sy ny zo.
Theo Rakotovao, mpanakanto malaza avy any akaikin'i Antanimieva, dia anisan'ireo olompirenena miasa misarika bebe kokoa ny saina ho amin'ireo olana momba ny fananantany. Raha niresaka tamin'ny TV Plus, nolazain'i Rakotovao fa nandeha tany amin'ireo kaominina izy mba hiresaka tamin'ireo olona nahilika sy ireo olona nanamora ireny fanilihana izìreny. Tsotra ny hafatra napetrany: tsy rariny ny famitahana ireo tompontany madinika ary tsy tokony hatao, ary ny Malagasy rehetra dia ilaina ho tonga saina amin'ilay toedraharaha.
Tao amin'ny YouTube, mpampiasa iray antsoina hoe manarivo, raha naneho hevitra tamin'ny dika iray amin'ireo ampaham-baovaon'ny TV Plus nakarina ao, no nanakiana ny tsy fisian'ny hetsika avy amin'ny fanjakàna:
Raha i Herinirina Doris Ratovondrahona nanontany hoe:
Ilay pejy malaza ao amin'ny Facebook, “Malagasy ve ianao” — misy mpanjohy efa maherin'ny 170.000 — koa dia nanao fanairana ny saina momba ireo fifanarahana 7 Ariary isaky ny metatra toradroa ireo, arahan'ny tatitra fohy avy amin'i Evah Randrianotahiana.
Mampiako ny hasosorana sy ny filavoana lefona ireo mpampiasa Facebook ao amin'ilay vondrona. Fanehoankevitra iray avy amin'i Nirina Andriatiana no mampiseho tsara izay fahatsapàna izay:
Dia tsy hisy azontsika vahoaka madinika atao mihitsy ve hiarovana ny tanintsika e? Mitaraina etsy sy eroa na @haino aman-jery na @n'itony tambajotra itony fa tsy misy mahasahy mijoro miaro, mila manambatra hery isika hamerenana ny hasin'ny tanintsika ry mpiray tanindrazana fa raha izao no mitohy dia tsy hay intsony izay hiafarana.